Ny tantara an-tsary Espaniola dia tsy mifikitra | Ireo mpamaky rehetra
Tsy mihantona ny tantara an-tsary espaniola
Tamin'ity herinandro ity dia hitantsika ny tatitra mahaliana navoakan'ny Tebeosfera Cultural Association (ACyT) izay isan'ny zava-misy mahaliana momba ny tantara an-tsary any Espana, izay manintona ny saina amin'ny fomba lehibe izay ny 20% amin'ireo tantara an-tsary novakin'ny Espaniôla ihany no manana ny tombokavoky ny mpanoratra Espaniola.
Na eo aza izany tarehimarika izany, ny tontolon'ny tantara an-tsary any Espana dia salama tsara ary ambonin'izany rehetra izany dia milamina. Tamin'ny 2013 ny tontolon'ny tantara an-tsary dia nanome vaovao 2.453 ho antsika.
Amin'ireo vaovao rehetra 40% dia avy any Etazonia, 15% avy any Azia ary 13% avy amin'ny firenena eropeana isan-karazany. 12% dia omena ny firenena samy hafa manerantany ary ny 20% ambiny dia nomen'i Espana izay noresahintsika teo aloha.
Ny iray amin'ireo data izay manintona ny saina ao amin'ilay tatitra dia hoe 95,67% amin'ireo tantara an-tsary navoaka dia amin'ny Espaniôla, mamela toerana kely ho an'ny tantara an-tsary amin'ny teny anglisy na fiteny hafa. Ny fisian'ny tsena tantara an-tsary amin'ny sasany amin'ireo fiteny mpiara-miasa hafa misy any Espana dia nihena be ary sarotra kokoa ny mahita tantara an-tsary amin'ny teny Catalan na Galisiana.
Anisan'ireo endrika izay ahitana ny tantara an-tsary, ny endrika endrika boky dia miavaka hatrany ambonin'ny zavatra rehetra, izay misy publication 1.771 (72,2%) no mitohy no manjaka indrindra amin'ny tsena, manaraka lavitra ny boky tantara an-tsary (16,97, 5,25% ) sy magazine (XNUMX%).
Mbola salama ara-pahasalamana ny tantara an-tsary any Espana, na dia indrisy fa ny ankamaroan'izy ireo dia tsy manana Espaniola ho mpanoratra azy ireo, na dia lavitra be aza ny fotoana raha tsy vokatra noforonina tao anatin'ny faritany Espaniola teto amintsika, dia tsy nisy liana na inona na inona.
Mpamaky boky tantara an-tsary mahazatra ve ianao?Amin'izay dia te hahalala ny hevitrao izahay ary indrindra ny zavatra vakianao sy ny fomba namakianao azy. Azonao atao izany amin'ny alàlan'ny fanehoan-kevitra amin'ity lahatsoratra ity, amin'ny forum na amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy misy anay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ireo mpamaky rehetra » Software » eBooks » Tsy mihantona ny tantara an-tsary espaniola
Tiako i Mortadelo sy Filemón 🙂
Heveriko fa ny fihenan'ny tantara an-tsary nataon'ny mpanoratra Espaniola dia noho ny fiheveran'ny maro azy io ho toy ny zavatra mampidi-doza. Ny tiako holazaina dia milaza fa maro no mieritreritra fa tsy famakiana kalitao izany ary tsy manome sosokevitra azy na tsy mamaky azy. Na izany aza, tiako izy ireo. Tena tsara ny tsikera nataon'i Ibañez momba ny vaovao avy any Espana.
Mon dia hoy izy:
Heveriko fa ny tantara an-tsary Espaniola dia mifamatotra amin'ilay hany zavatra tsy misy tsena eto (mbola betsaka ny olona any Espana mieritreritra fa natao ho an'ny ankizy ny tantara an-tsary) ary ireo mpanoratra ireo dia mila miasa any ivelany matetika. Amin'izao fotoana izao ny tena tiako no komikin'i Bonelli izay havoaka eto amintsika: Dampyr, Tex, Zagor sns.
Mamaly an'i mon
Izay no lazainao, Mon, no tiako holazaina; Mino ny olona fa tsy matotra mihintsy ny famakiana tantara an-tsary, mandany fotoana sns ... daholo ny foto-kevitra momba ny pejorative, rehefa mianatra toy izany koa ny zaza iray (ohatra) amin'ny famakiana an'i Mortadelo sy Filemón ho "El Pollo Pepe "(raha hiresaka anaram-boninahitra) ary mazava ho azy fa ny olon-dehibe dia afaka mamaky tantara an-tsary amin'ny fomba lavorary, ny zava-mitranga dia manana an'io hevitra io izy Mahamenatra satria misy ny tantara an-tsary tena tsara, tsy ireo notononin'i Mon na ireo nandritra ny androm-piainany ihany, fa ny hafa izay zara raha velona.
Raha ny amiko dia najanoko ny famakiana Mortadelo y Filemón taona maro lasa izay, na dia nihalehibe tamin'ireo tantara an-tsary ireo aza aho. Noho ny fandehan'ny fotoana dia aleoko nifindra tamin'ny karazana "matotra" kokoa toa ny katalaogin'i Norma.
Na izany na tsy izany, avy any Espana raha namaky ny BlackSad aho.